SIDA LOO DIYAARIYO ISTEROBERI JIILAALKA: QALAJIYEY, LA QALAJIYEY OO LA QABOOJIYEY - KU'SAABSAN
Siyaabo aad u moobiddo isteroberi jiilaalka
Geedka - miro caafimaad oo aad u fiican oo caafimaad leh, oo aan loo isticmaali karin oo kaliya qaabka dabiiciga ah ama qaabka xabagta, saxaradaha, marmalades, miro la jarjaray, iwm, laakiin sidoo kale sida qayb ka mid ah dhadhanka cusub ee macmacaanka iyo saladaha, maraqa iyo suxuunta ugu muhiimsan hilibka iyo kalluunka.
Noocyada qaar ka mid ah isteroberi ayaa si fiican loo hayn karaa ilaa qabow, laakiin su'aasha ah sida si haboon u goosan isteroberyo qaboobaha ayaa weli ahmiyad gaar ah u leh hooyooyinka intooda badan.
Sidee loo isticmaalaa cayayaanka la qalajiyey?
Isticmaalka canbaar sida miro qalalan ayaa kuu ogolaanaya inaad ku haysato fiitamiinada ugu muhiimsan ee ku jira, iyo sidoo kale pectin iyo macdanta oo isteroberyadu hodan yihiin - birta, zinc, iodine, potassium, calcium, copper, carotene, iwm.
Pear qalalan waxay hagaajinaysaa hawlaha wadnaha, waxay sidoo kale ay faa'iido u leeyihiin sanbabada, beerka iyo kelyaha. Faa'iidooyinka pear qalajiyey ayaa sidoo kale muujiyay kartida ay u leedahay in ay dejiso nidaamka dareenka, yareeyo saameynta diiqadda iyo niyad-jabka, tayada oo kor u qaadaan guud ahaan wanaagga.
Miro qalalan ayaa ka saaraya sunta ka timaadda jidhka, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa hargabka. Isku dar ah isteroberi qallalan ayaa durbadiiba, durbadiiba iyo xitaa walxaha dareeraha ah.
Miskaha la qalajiyey ayaa ka mid ah nooc naadir ah oo khudradda la qalajiyey oo aan ka horjoogsaneynin fangorosiinka.
Ma taqaanaa? Pear - labadaba cusub oo la qalajiyey - waa qayb ka mid ah cuntooyinka kala duwan ee loogu talagalay in laga takhaluso miisaanka xad-dhaafka ah. Miro badani kuma koobna oo kaliya sonkorta yar, laakiin sidoo kale waxay awood u leedahay inay hoos u dhigto heerka sonkorta dhiiga bini'aadamka, sidaas darteed, pear qallalan waa badeecad ay jecel yihiin dadka qaba cudurka macaanka.
Xaqiiqada ah in pear qalajiyey waxaa loo yaqaanaa boqoradda ka mid ah miraha waxaa ugu fiicnaan doona ragga, maadaama badeecadani loo isticmaalay prostatitis taniyo wakhtiyadii hore.
Gabadh wanaagsan oo jiilaalka ah ayaa ku daraysa ninkeeda shaah, gaar ahaan haddii uu ka weyn yahay afartan, jeexniyada isteroberi la qalajiyey si looga hortago cudurkan aan fiicnayn, iyo ukumaha Yukreeniyaan iyada oo aan engegin pear waa wax aan la malayn karin in dhan.
Sida loo qalajiyo isteroberi jiilaalka
Waxaa ugu wanaagsan in lagu qalajiyo weli aan si buuxda u qumman, laakiin ma ah casaan khafiif ah oo caano dhexdhexaad ah. Waxaa habboon in la isticmaalo noocyada xagaaga.
Nabaro la qalajiyey sida "Bergamot", "Forest Beauty", "Fragrant" waa kuwo wanaagsan. Waxaa muhiim ah in pear uu leeyahay cufan, laakiin aan jidhka ahayn.
Waa muhiim! Miro aad u badan ayaa ku haboon in lagu qalajiyo. Si kastaba ha noqotee, waxaa si wanaagsan loogu isticmaali karaa meelaha kale ee banaan-ka-soo-baxa, macmacaanka, ama jajabka.
Qalajinta isteroberi ee guriga waxaa loo samayn karaa labo siyaabood - iyadoo leh ama aan lahayn wax qabad kulul.
Xaaladda kowaad, midhaha ma si toos ah u madoobaato inta lagu jiro qalajinta, laakiin kan labaad wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku keydsato faytamiin iyo nafaqooyin dheeraad ah badeecadda dhamaysay.
Iyadoo aan loo eegin qaabka la doortay, isdabajooga laga soo qaaday geed ka badan laba maalmood ka hor waa in lagu dhaqaa biyo socda.
Haddii habka daaweynta loo doorto, isteroberi ayaa la jarjaray biyo karkaraya dhowr daqiiqo (iyadoo ku xiran macaanaanta isteroberi, waxaad ku dari kartaa sonkor ama citric acid biyaha).
Sida ugu dhakhsaha badan isteroberi jilicsan, waxaa lagu tuuraa colander, loo oggol yahay in la daadiyo, iyo isteroberi gebi ahaanba qalalan.
Tallaabooyinka dheeraadka ah waa isku mid labada habab. Isteroberi ayaa laga nadiifiyaa laga bilaabo asaasiga iyo jarjar biraha ama cinjiryada ku saabsan dhererka centimeter. Haddii pear uu aad u yaryahay, ma jiidi kartid.
Shaqada diyaargarowga waa la dhammeeyaa, waxaad tagtaa habka qalajinta.
Kiimikada waa la qalajin karaa hab dabiici ah - hawada furan, balakoonka, teras, iwm., Ama heerka dardargelinta - foorno, qalajiye koronto, naxaas ama foornada microwave. Mid kasta oo ka mid ah hababkaasi waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido daro.
Mashiinka qallalan ee qorraxda
Tani waa habka ugu jaban uguna dabiiciga ah ee lagu qalajiyo. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay wakhti iyo waqti badan oo dheeraad ah - aagga iftiin leh. Waxay u fiicantahay kuwa leh hool, aqal gaar ah ama ugu yaraan balakoon qorrax leh.
Haddii aad dooratid habkan, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la tixgeliyo xaaladaha cimilada: haddii midhaha la qalajiyo hawada furan, waa inaysan qoyanin roobka lama filaanka ah - calaamadaha ugu horreeya ee roobabka, waa in jeermisku si dhakhso ah ugu dhaqaaqo hoostiisa, haddii kale habraaca oo dhan ayaa loo tixgelin karaa fashilka.
Caji ah oo isweydaar ah oo la jarjaray ayaa la dhigaa si qumman oo dusha sare leh oo leh dhinac casiir leh. Ka soo kabashada sare, miro waa in lagu daboolaa faashad si looga ilaaliyo cayayaanka (marka qalajinta balakoonka xiran, taxadarkan aan loo baahnayn) oo baxo dhawr maalmood.
Hannaanka qalajinta waa in si joogto ah loola socdo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, qaybaha khudradda waa in loo rogaa xitaa qallajinta. Iyadoo ku xiran heerkulka iyo cadadka qorraxda, qalajinta waxay qaadan kartaa laba illaa toddoba cisho, ka dib marka midhaha laga saaro nalka meel bannaan leh oo ka baxsan laba maalmood oo kale.
A pear qalajiyey habboon waa in aan dib u burburin oo jebin. Qoyaanka intooda badani waxay ka soo baxaan midhaha, laakiin qaybaha waa inay noqdaan kuwa jilicsan.
Iskudeysiga isteroberi foornada
Pear qalajiyey karaa si dhakhso ah loo kariyo ee foornada. Nidaamka oo dhan wuxuu qaadanayaa qiyaas ahaan 12-14 saacadood.
Kiimikada la jarjaray waa in lagu faafiyo xaashida dubista si aaney u daboolin midba midka kale, waxaana lagu riday foorno kulul ilaa 50-55 digrii. Waxaa fiican inaad albaabka ka baxdo foornada foornada si markaasi pear kuugu filnaado hawo.
Habka waa in si joogta ah loola socdo iyadoo la qaboojinayo heerkulka iyada oo ku xiran hadba xaaladda miro.
Qiyaasta dhexdhexaadinta, marka cayayaanka horay u qalalan yihiin, laakiin aan weli si buuxda loo diyaarin, waxaad ku dari kartaa heerkulka yar si aad u dhaqaajiso habka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad mar labaad ku qallajiso heerkulka ugu hooseeya.
Waa muhiim! Haddii miskaha foornada bilaabay inuu madow yahay - tani macnaheedu waa in heerkulka uu aad u sarreeyo, waa inaad isla markiiba yareysaa kuleylka, haddii loo baahdo, qabow oo u jeedi qeybaha kale!
Ka dib marka la qallajiyo dhamaadkii (waxaa la go'aaminayaa isla marka la qallajinayo qorraxda) foornada ayaa la gooyey, isteroberi ayaa laga saaraa oo ka tagay si qallajin muddo laba maalmood ah heerkulka qolka, ka dibna la dhigo gasacadaha nadiifka ah ama bacaha warqadaha kaydinta meel meel looga ilaaliyo qoyaanka ilaa jiilaalka.
Qalajinta foornada ma ku haboon tahay miraha oo dhan, maadaama ay qaadanayso waqti aad u badan - mararka qaar ka badan hal maalin.
Iskuulisid isteroberi korantada korantada
Tani waa habka ugu habboon ee loo sameeyo miro qalalan. Baahida keliya ayaa ah baahida loo qabo in lagu iibsado qalajiye koronto oo khaas ah oo ku qarash gareeyo lacag si ay u bixiso koronto.
Xabbado miro ah oo la diyaariyey ayaa la dhigaa saxaarada qalajiyaha korontada oo la qalajiyey heerkul ah 70 darajo oo leh marmar marmar ah. Mashiinka qalajinta ee qalajiyaha korontada wuxuu qaadanayaa 15-20 saacadood, iyadoo ku xiran nooca pear iyo xajmiga qaybaha.
Sida qallajinta foornada, isteroberi waa in aan la dhigin qof aan la seexan si aanay u qalajin - xayawaanku waxay noqon karaan buni, laakiin ma aha inay madoobaan oo bilaabaan inay jebiyaan.
Isku-darka isdabajooga microwave
Waad qallajin kartaa isdabamarin microwave - dhowr daqiiqadood oo keliya. Qalabka lagu rakibay, googooyinku waxay ku jiraan foornada. Mode waxay kuxirantahay qalabka guriga.
Haddii foornadu ay tahay mid awood leh, waxaa haboon in la dejiyo qaabka ugu hooseeya, midka awoodda yar - midka dhexdhexaad ah. Isticmaalka heer sare ma gaabin doono waqtiga qalajinta, laakiin si fudud u gubi midhaha.
Ka dib 2-3 daqiiqo, pear waa in ay diyaar noqotaa, laakiin haddii aad aragto in qaybaha weli qoyan yahay, waxaad u baahan tahay inaad dib u bilowdo foornada daqiiqo nus ah iyo hubi natiijada mar kale.
Waxaad sidoo kale qalajin kartaa miskaha microwave adigoo isticmaalaya habka "defrost". Tani waa ikhtiyaarka aan wanaagsanayn, waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku fidiso nidaamka 30 daqiiqo mana ubaahnid kormeer si taxadar leh u ah geeddi-socodka.
Si kastaba ha ahaatee, waa weli 2-3 jeer ka fiican si loo eego isteroberi si loogu diyaar garoobo si looga hortago xad dhaafka.
Sida loo kaydiyo isteroberi qallalan
Si pear u ilaaliyo dhamaan waxyaabaha wanaagsan ee muhiimka ah, waxaa lagama maarmaan ah ma aha in si habboon loo qalajiyo, laakiin sidoo kale si sax ah u badbaadin.
Miraha qalalan waxaa si fiican loogu hayaa qaab daboolan si aanay u helin qoyaanka. Ujeedadaas awgeed, mashiinnada muraayadaha ama muraayadaha daboolka leh ee daboolka ah ayaa ku habboon, iyo sidoo kale bacaha gaarka ah ee qalabaysan oo leh qalab.
Haddii aysan jirin maqnaansho, waxaad u baahan tahay inaad isku daydo inaad hesho meel qabow mugdi u ah isteroberi la qalajiyey. Haddii ay suurtogal tahay, waa in ay noqdaan kuwo kala gooni ah oo ka yimaada dhir udgoon, dhir udgoon iyo walxo kale oo karis ah, tan qalajinta ayaa leh awood u leh inay ku soo urto urka.
Miraha la qalajiyey waa in si joogto ah loo duubo loona hubiyo joogitaanka koritaanka fungal. Calaamadaha ugu horreeya ee caaryaradu waa amar toos ah oo lagu tuuro alaabta aan qoomameynin.
Under shuruudaha oo dhan, isteroberi qalajiyey in la kaydin karaa ilaa guga soo socda.
Miraha la soo koobay ayaa ah wax soo saarka cuntada oo ka yar miro la qalajiyey, si kastaba ha ahaatee, waxay ka yar yihiin kaloori iyo, si waafaqsan, ka faa'iideysta macmacaanka kale.
Sida pears qalajiyey, miraha candied ka soo miro ayaa taajir ah ee fiber iyo ilaalin vitamiin, macdanta iyo qaybaha raad.
Sida laga soo xigtay qaabka diyaarinta, miraha candiedka ah waa qaybo miro la kariyey ee sharoobada sonkorta oo xoog leh iyo kadibna la qalajiyey.
Kiimiko, si fiican oo aan si fiican loo qallajin karin, maydhin, laga nadiifin karo furaha iyo jarjarida sharooto badan, oo lagu daro sharoobada sonkorta (qadarka sonkorta waa inay u dhigantaa miisaanka la jarjarey) iyo si tartiib ah u kari ilaa sharoobada.
Pear-diyaar-dhigay waxaa la dhigay on ku xoqin, rusheeyey sonkorta iyo qalajiyey qoraxda ama foornada on kulaylka yar.
Ka fogow baahida candhuufta ah iyo sidoo kale miraha la qalajiyey.
Cuntada khudaarta la qalajiyey
Qalajinta, sida qalajinta, waxay ku lug leedahay kala soocida qashir ka soo casiir ah iyadoo la raacayo marxalado badan oo hawada ah iyo heerkulka hooseeya. Asal ahaan qalajinta - Tani waa nooca qalajinta qabow.
Dhirta qalajinta ayaa la doortaa lana baaraandego si la mid ah sida qalajinta, laakiin xaleefyada ayaa laga dhigi karaa mid xoogaa dhumuc ah.
Qaybaha diyaarka ah ayaa lagu meeleeyaa baaquli dhaldhalaalka ah waxaana lagu daboolay sonkorta (marka la barbardhigo qiyaastii 1 sonkor ah ilaa saddex qaybood oo isteroberi ah). Foomkan, pear waa in looga tagaa 2.5 maalmood heerkulka qolka.
Noocyadaas ayaa dib loogu celiyaa colony, taas oo u oggolaanaysa sharoobada in ay la socoto casiirka, ka dibna ku faafin 50 daqiiqo sharoobada sonkorta (0.7 ml oo sharoobada ah 1kg oo isteroberi ah), kiciya oo laga saaro kuleylka iyada oo aan daboolin dabool leh. Ka dib 8-10 daqiiqo, isteroberi ayaa mar kale la tuuraa waxaana loo ogolyahay inay si buuxda u daadiyaan saacad.
Marka miraha la dhigo lakabka keliya ee shabaqa iyo bidix muddo toddobaad ah meel hagaagsan oo hawo leh (sida pear dhoobo waa in loo rogaa dhowr jeer) ama, si loo dedejiyo geedi socodka, ku rid foosto kulul ilaa 60 ° C 40 daqiiqo, ka dib Qabooji oo mar kale ku celi habraaca, mararka qaarkood ilaa saddex jeer. Waxaad sidoo kale xiri kartaa pear ee qalabka korontada.
Cayayaanka la qalajiyey waa in ay ahaadaan kuwo cufan oo dabacsan.
Sida loo xakameeyo isteroberi jiilaalka
Cawska qaboojinta ayaa ah habka ugu fiican ee aaney ku haysan dhammaan nafaqooyinka ku jira, laakiin sidoo kale in la helo badeecad loo isticmaali karo karinta iyo sidoo kale isteroberi cusub.
Ka hor inta aanad qabin isteroberi, ku dhaq oo si fiican ugu tirtir tuwaal waraaq ah.
Ma taqaanaa? Qadarka fitamiinada ku jira pear saxda ah ee la qaboojiyey waa mid la mid ah sida mid cusub, iyadoo la bixiyay in midhaha la qaboojiyey heerkul aan ka sareeyn -16 ° S, waxaana lagu keydiyay heerkul aan ka badnayn -8 ° S. Waa suurtagal in la marmarsiiyo jeermiska barafka mar kale!
Pear-barafka qabow ayaa lagu keydin karaa hal sano.
Maraqa la barafeeyey ama xaleefyada
Isteroberi la diiri karo, jarjar xaleef ama qaybo ka mid ah cabbirka la rabay. Sidaas in pear ma madow, waxaad ku rushaysaa karo liin.
Googooyinku waxay ku yaallaan dusha sare ee daboolka ah ee la daboolay filimka-fasalka ama foornada oo lagu meeleeyo barafeeyaha maalin.
Ka dib markaad dhamaystirto, cayayaanka waxaa lagu dhigaa baco balaastig ah oo si gaar ah loogu talagalay (oo aad u baahan tahay inaad sii dayso hawo iyo si adag u xidh) ama weelasha oo lagu dhigo qaboojiyaha loogu talagalay kaydinta xiga.
Tiknoolajiyada diyaarinta waa isku mid sida qaabkii hore, laakiin ka hor inta aan la isku darin isbalaarinta si loo xakameeyo gabal kasta waxaa lagu rusheeyaa sonkorta.
Isteroberi ayaa loo diiriyaa, cufan iyo jarjar. Qaybaha waxaa lagu miiray sharoobada sonkorta (qiyaasta 1 koob oo sonkor ah halkii 0.5 litir oo biyo ah) saddex daqiiqo, lagaa saaro isticmaalka shimbiraha, la geliyo caagaga caaga ah ama dhalooyinka iyo ka buuxsamay sharoobada (waa inay si buuxda u daboolaan isteroberi).
Adigoo xiraya weelka, u ogolow in alaabtu ay si buuxda u qaboojiso, ka dibna si adag u xir oo qaboojiso. Midhaha loo diyaariyay habkan si fiican ayaa loo ilaaliyaa ilaa dhammaadka guga.